ArchLinux တွင်ဒေသတွင်းပြproblemနာကိုပြုပြင်ခြင်း Linux မှ
အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအရ၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ... esDEs language ကို KDE5တပ်ဆင်ခြင်းထဲ၌ထည့်ပြီးတဲ့နောက်၊ application တော်တော်များများအလုပ်မဖြစ်တော့ပါ။ ဘယ်တော့လဲ (အမှားမှတ်တမ်းကြည့်ရှုရန်) ငါသူတို့ကို terminal ကို run လိုက်တယ်၊
ဥပမာအားဖြင့် 'std :: runtime_error' what (): locale :: facet :: _ S_create_c_locale အမည်ကိုမဖွင့်ဘဲပစ်ပြီးနောက် terminate ဟုခေါ်သည်။
သင့်တွင်စနစ်သည် 'ဖမ်းမိ' ခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝလက်မခံနိုင်သောဘာသာစကားကိုပြုပြင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ဒေသခံဘာသာစကား (သို့) ကွန်ပျူတာစနစ်ကိုကောင်းစွာပြုပြင်ရမည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်သင်ကြားပေးမည်
1. ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုမည်ကိုသိထားရမည် (သိသာထင်ရှားသည့်အရာ၊ haha)၊ es_ES ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါစို့)
Uncomment ဆိုသည်မှာ pound နိမိတ် (#) ကိုထိုမျဉ်း၏အစမှဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်သည်။
4. အဆင်သင့်, ယခုငါတို့ဝုဏ်အတွင်းထုတ်လုပ်ရန်သွားကြသည်:
5. ဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပါက /etc/locale.conf ဖိုင်ကိုစစ်ဆေးပါမည်။
LC_ALL = C ကို LANG = es_ES.UTF-8 LC_COLLATE = es_ES.UTF-8
ပထမအကြိမ်လိုင်း (LC_ALL = C) ကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းမထားဘူးဆိုရင်၊ applications များအလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်
အခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာသူတို့ကအောက်ပါ command ကိုအကြံပြုကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မယ် -
ပို့ကုန် LC_ALL = ကို C
ကောင်းပြီဘာမျှမ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ LC_ALL = C ကိုရည်ညွှန်းတဲ့လိုင်းဟာ .conf ဖိုင်ထဲမှာရေးထားတာမဟုတ်လို့၊ ဘာကြောင့်လဲ…ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ TeamSpeak နဲ့ GParted လို applications တွေကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ ဒီဟာက KDE5ဆိုတာနဲ့သက်ဆိုင်နေနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်တယ် (ဒါက KDE ရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးလို့ငါထင်တယ်) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » ArchLinux တွင်ဒေသတွင်းပြproblemနာကိုပြုပြင်ခြင်း
၎င်းသည်တူညီမှုရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော် Archbang ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးချီလီတွင်စပိန်ဘာသာစကား (es_CL) ကို configure လုပ်သောအခါ၎င်းသည်ပုံမှန် system language (အင်္ဂလိပ်) ကိုမပြောင်းလဲပါ။ ဒီတော့ငါလုပ်ခဲ့တယ်၊ es_CL အပြင်၊ အာဂျင်တီးနား၏စပိန် (es_AR) ထပ်ပေါင်းထည့်သည်။ locale.gen ကိုထုတ်ပြီးပြန်လည်စတင်သည်နှင့် system system ကိုစပိန်ဘာသာပြောင်းခဲ့သည်။ ထူးဆန်းပါတယ်၊ Archbang ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်သောအခါသင်၏နည်းလမ်းကိုစမ်းသပ်ရလိမ့်မည်။
ငါမှားယွင်းသောရွေးချယ်မှု (အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်အမှား) လုပ်၍ စနစ်သည် Euskera XDD တွင်ထွက်လာသည်
ငါ nano xq နှင့်ပထမနှင့်တတိယစာကြောင်းများကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်မလိုခဲ့ပါ၊ သို့သော်အရေးကြီးသည် nothing
ငါ sudo locale-gen ကိုသုံးသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက် /etc/locale.conf ဖိုင်ကိုမဖန်တီးပါ။ terminal ထဲ၌အသံထွက်မရှိပါ။
Ubuntu Netbook Remix: bye OO၊ Abiword & Gnumeric မင်္ဂလာပါ